လွယ်ပါတယ် အရမ်းကို လွယ်ကူပါတယ် အဆင့်နှစ်ဆင့်ထဲနဲ့ Apk file လေးတွေကို Online ပေါ်မှာ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းဖန်တီးနိုင်မှာပါ
ဖန်တီးရမယ့်Apk ဖိုင်လေးရဲ့ အကြောင်းကတော့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ မိမိ သဘောကျတဲ့ ဆိုဒ်ကလေးတွေကို ဖုန်းထဲမှာ ဖုန်းစကရင် နဲ့ Fix အဖြစ် ဖတ်ရှူ့လို့ရအောင် ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်မှာပါ ။
ဖုန်းမှာပေါ်မယ့် Apk ရဲ့ iCon ကိုလဲ ကြိုက်တဲ့ပုံထည့်လို့ရပါတယ် ။
ပထမဆုံး ဒီမှာကလစ်နှိပ်ပြီး ဖိုင်ဖန်တီးမဲ့ ၀က်ဆိုဒ် ဆီကို သွားပါ http://www.appsgeyser.com/
ဆိုက်ထဲရောက်ပြီဆိုရင် အဲဒီမှာ CREATE APP NOW! ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်လိုပါ
WEBSITE ဆိုတဲ့စာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ ။
( 1 ) မှာ သင့်ရဲ့ ဆိုက်လင့်ကို ထည့်ပါ
(2) သင့် Apk ကို ဖုန်းမှာအင်စတောလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ iCon နာမည်လေးကို သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာထားပါ ။
Description ဆိုတဲ့အကွက်မှာ ဖြည့်ရန်မလိုပါ ။
(3) သင့် Apk ကို ဖုန်းမှာအင်စတောလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ iCon ပုံလေးကို သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာထားဖို့ရန် Custom iCon ကိုရွေးပြီး UPLOAD ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ သင့် My Computer ဘောက်လေးထွက်လာပါမယ် သင်မှာရှိသောပုံကို ရွေးခြယ်ပြီး iCon ပုံထားနိူင်ပါတယ် ။
(4) Auto စာလေးကို ရွေးထားပေးပါ ။
ပြီးပြီဆိုရင် CREATE APP ဆိုတဲ့ ဝိုင်းထားတဲ့စာကိုနှိပ်လိုက်ပါ ။
အပေါ်ကအဆင့်တွေ လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ဆိုက်မှာ မန်ဘာဝင်ဖို့ရန် Register ဖြည့်ရပါမယ် ။
First Name = သင့်ရဲ့နာမည်ဖြည့်ရန်
Last Name = သင့်ရဲ့နာမည်ဖြည့်ရန်
E-mail = သင့်ရဲ့ အီးမေးဖြည့်ရန်
Password = သင်သူ့ဆိုက်ကို ဝင်ဖို့ရန် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပတ်စဝတ် ထည့်ရန်
Retype Password = သင်ထည့်ထားသော ပတ်စဝတ်ကို နောက်တစ်ခါမှန်အောင်ဖြည့်ထည့်ရန်
I agree with the ဆိုတဲ့ မြှားပြထားတဲ့စာလေးကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ ။
အားလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ SIGN UP ဆိုတဲ့စာလေး နှိပ်လိုက်ပါ ။
အပေါ်ကအဆင့်တွေ အားလုံးဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင် မိမိလုပ်ထားသော Apk ဆော့ဝဲလေးအား ဒေါင်းဖို့ရန် Download စာမျက်နှာလေးထွက်လာပါပြီ
Posted by ကောင်လေးငယ် at 6:48 PM2comments: Links to this post
Facebook News Feed မှာ အရည်မရ အဖတ်မရ ပို့စ်တွေ ကြောင့် စိတ်မညစ်ရမဲ့ နည်းလေးပါ
News Feed မှာ ကိုယ်မမြင်ချင်တဲ့ သူရဲ့ page ကိုသွားပြီး Friends button ကိုနှိပ် Shows in News Feed ကို uncheck လုပ်ပေးလိုက်။ ဒါဆိုရင် အဲဒီကျေးဇူးရှင်ရဲ့ အရည်မရ အဖတ်မရ ပို့စ်တွေ သင်ရဲ့ News Feed မှာ တွေ့ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အာရုံနောက်ခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေ။
Posted by ကောင်လေးငယ် at 9:10 PM 1 comment: Links to this post
ဟိုတုန်းကရွာတစ်ရွာမှာ အသက်70ကျော်အဖိုးအဖွားလင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့6နှစ်အရွယ်ယောက်ကျားကလေး တစ်ယောက်အတူနေထိုင်သတဲ့ကွယ်။အဖွားကိုအဖိုးကသိပ်ချစ်သတဲ့။ အဖွားကသွေးဆုံးကိုင်တော့ကျန်းမာရေးကသိပ်မကောင်းဘူးပေါ့ကွယ်။ တစ်နေကျတော့ အဖိုးကဈေးသွားခါနီး အဖွားကို ဈေးက၀ယ်ဖို့မေးသတဲ့။ "အဖွားရေငါးရံ့ဆန်ပြုတ်သောက်မလား"ဆိုတော့ ကလေးကသဘောကျသွားတယ် သူလဲစားရမှာကိုး။ အဖွားက "မစားချင်ပါဘူး"လို့ဖြေလိုက်တော့ ကလေးစိတ်ဓါတ်ကျသွားတယ်။ ဒါနဲ့ အဖိုးက "ငါးခူကျော်လေးများစားမလား"ဆိုတော့ ကလေးကပျော်သွားပြန်ရော အဖွားက"မစားချင်ပါဘူး"ဆိုတော့ ကလေးဒေါသထွက်လာတယ်။ အဖိုးက "ကြက်သားကျော်လေးများစားမလား"လို့မေးတော့ အဖွားက "မစားချင်ပါဘူး"လို့ထပ်ပြောတယ် ကလေးတော်တော်ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ အဖွားကိုအော်လိုက်တယ် "ဒါဆိုလဲ****စားဗျာ" အဲဒါနဲ့ အဖွားက အဖိုးကိုပြောလိုက်တယ် "ကလေးကမှသိသေး"
ယောက်ကျားက မိန်းမေ၇ဈေးသွားမလို့ဘာမှာမလဲမေးတော့ မိန်းမကဘော်လီအကျီဝယ်ခဲ့ဘို့မှာလိုက်တယ် ဈေးထဲဘော်လီအကျီိဆိုင်ေ၇ာက်တော့ ဆိုင်၇ှင်ကဘယ်ဆိုက်ယူမလဲလို့မေးဒါပေါ့ ၀ယ်သူ=ပြော၇ခက်နေတယ်ဗျာ ခင်ဗျားအ၇င်ပြောကြည့်ဗျာ
၀ယ်သူ=ဟာ မဟုတ်တာ အဲဒီလောက်မကြီးပါဘူး လျှော့ပါဦး
ေ၇ာင်းသူ=(စိတ်တိုလာပြီး)ကဲဒါဆိုနောက်ဆုံးဘဲကြက်ဥဗျာ ၀ယ်သူ=အေးဟုတ်ပြီကြက်ဥတော့ကြက်ဥဘဲဒါပေမဲ့အပြုတ်တော့မဟုတ်ဘူး အကြော်နော်
တစ်ခါက လင်မယားနှစ်ယောက်မှာ မိန်းမက ၀လာတော့ ထုံးစံအတိုင်း ယောင်္ကျားလုပ်တဲ့သူက အသစ်ရှာတာပေါ.့
အဲဒီမှာ ယောင်္ကျားကို... ရှင်တို့ယောင်္ကျားတွေက သစ္စာကို မရှိဘူး. အမြဲ ဖေါက်ပြန်ချင်နေတာ. ဆိုပြီးပွားတာပေါ့.
ယောင်္ကျားလဲ ပြန်မေးလိုက်တယ်. သစ္စာဆိုတာဘာလဲ သိလား.တဲ့
မိန်းမက .မပြောင်းလဲချင်း. လို့ဖြေတာပေါ့.
.. အေး ငါလဲ အစထဲက ငယ်ငယ် ပိန်ပိန် လှလှလေး ကိုဘဲကြိုက်တာ.. နင်ကသာ သစ္စာ မရှိဘဲ ၀လာတာ. ငါ့က ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူး သစ္စာရှိတယ်.. ဆိုပြီး ပြန်ပြောလိုက်သတဲ့..
Posted by ကောင်လေးငယ် at 3:39 PM No comments: Links to this post
ပုံပေါ်မှာ စာရေးလိုသောသူများ အတွက်ပါ
ဖိုတိုရှော့ မရသူများ အလွယ်တကူ သုံးနိုင်ပါသည်။ ဖိုတိုရှော့လောက်တော့ အကောင်းဆုံး မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကြိုအသိပေးတာပါ ။
( ၁ ) ကွန်ပျူတာထဲမှာ ရှိသော ဓာတ်ပုံပေါ် မောက်စ် တင်ပြီး မောက်စ်ရဲ့ ညာဘက်ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
( ၂ ) ပေါ်လာသည်ထဲမှ Edit ကို နှိပ်ပါ။ ဖိုင်တစ်ခု ပွင့်လာပါမယ်။ အထဲမှာ မိမိ နှိပ်လိုက်သော ပုံကို တွေ့ပါမယ် ။
( ၃ ) စာရေးရန်အတွက် ကွန်မာဗူးထဲက A ပေါ်ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ ပုံပေါ်မှာ မိမိ
စာရေးလိုသော နေရာ၌ မောက်စ်နဲ့ ဖိဆွဲလိုက်ပါ။ အကွက်လေး ပေါ်လာပါမယ်။ အကွက်လေးထဲတွင်
မိမိရေးချင်သော စာသားများကို ရေးလို.၇ပါပြီ ။ ကာလာနဲ. ရေးချင်၇င်တော. ထိပ်ပိုင်းနားက
ကာလာအကွက်ထဲက မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ. color ပေါ်မှာ ကလစ်နှိပ်ပြီး ရွေးချယ်ပါ ။
( ၄) စာလုံးအမျိုးအစားရွေးချင်ရင်တော့ စာရေးမည့်အကွက်ထဲကို မောက်စ်တင်ပြီး မောက်စ်ရဲ့
ညာဘက်ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ကွန်ပျူတာရဲ့ ထိပ်မှာ အတန်းတစ်ခု ပေါ်လာပါမယ်။ အဲ့ဒီအထဲမှ Text Toolbar
ကို နှိပ်ပါ။ စာလုံးအရွယ်အစား၊ အထူအပါး၊ စာလုံးစောင်းတို့ကိုလည်း ရွေးလို့ ရပါတယ်။
( ၅) ပုံကို ကျဉ်းလို ကျယ်လိုရင်တော့ ကီဘုတ်မှ Ctrl နှင့် W ကိုတွဲနှိပ်ပါ။ ပေါ်လာတဲ့ ဘောက်စ်အသေးလေးထဲမှာ
ပုံရဲ့ အကြီးအသေးကို ဂဏန်း အတိုး အလျှော့ လုပ်ပြီး ရွေးပါ ။ ရွေးပြီး ok ကို နှိပ်ပါ။ ပုံကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ပြင်၊
စာတွေလည်း စိတ်ကြိုက်ရေးပြီးသွားရင်တော့ ကွန်ပျူတာရဲ့ ဘယ်ဘက်ဒေါင့်ထိပ်ဆုံးမှာ file
ကို နှိပ်ပါ။ ပေါ်လာသည်အထဲမှ save As.. ကို နှိပ်ပြီး ပုံကို သိမ်းလိုက်ပါ။
ကဲ.................. ဒါဆိုရင်တော. ဓာတ်ပုံပေါ်မှာ စာရေးသားခြင်း ပြီးဆုံးသွားပါပြီ ။ လုံးဝ မသိသေးသူများအတွက် စာနာမှုလေးနဲ့ပါ။ ။
Posted by ကောင်လေးငယ် at 10:45 AM No comments: Links to this post
ကဗျာလိုလို ဘာလိုလို (2)
တောင်သာ သားလေးရဲ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံများ
ဆရာအတ္တကျော်၏ ဖို၊မ ရေးရာ သိမှတ်စရာများ
What is good thing ???
I want2make you happy!